Akụkọ - Nrụgharị usoro nri nri anụ ọkụkọ akpọnwụ akpọnwụ akpọnwụla
Ọkụkọ anụ ụlọ kpọnwụrụ akpọnwụ chọrọ igwe na-ehicha nkụ mgbe ọ na-eme ya. Dịka ọmụmaatụ, ọkụkọ pusi kpọnwụrụ akpọnwụ. Tupu ịme ọkụkọ, kwadebe ọkụkọ wee bee ya n'ime obere iberibe ihe dị ka 1CM, nwee oke dị gịrịgịrị, ka ọnụego nkụ ya dị ngwa ngwa. Wee tinye ya na igwe nhicha igwe oyi L4, n'ikpeazụ tinye ya n'ime karama kara akara. Ọ dị mfe mana ọ dị mgbagwoju anya n'ezie. Ka anyị leba anya na uru dị na ihicha nkụ.
1. Nri nwamba oyi kpọnwụrụ akpọnwụ nwere afọ ojuju dị elu
Anụ a na-akpọnwụ nwamba bụ anụ ọhụrụ dị ọhụrụ, nke a na-eme ya site na oyi na-adị ngwa ngwa na ewepu ogo 36 Celsius na akpịrị ịkpọ nkụ na nkụ. N'ihi usoro pụrụ iche, enwere ike ịchekwa ụtọ na ihe oriri nke anụ ahụ, na anụ na-akpọnwụ bụ anụ dị ọcha, yabụ ọdịnaya protein dị na ihicha nkụ bara ọgaranya nke ukwuu. Ndị nwe nwamba ekwesịghị ichegbu onwe ha maka nri agaghị enwe ike ijigide mgbe ha na -enye nwamba ha nri, na nwamba chọrọ protein karịa n'oge uto, ka pusi wee nwee ike too.
2. Nri nwamba kpọnwụrụ akpọnwụ maka nri dị mfe
Nri nwamba kpọnwụrụ akpọnwụ dị iche na nri nwamba ndị ọzọ mgbe ị na-eri nri. Enwere ike inye nri nwamba akpọnwụ akpọnwụ ozugbo mgbe ị na-eri nri. Ụdị nri nwamba a kpọnwụrụ akpọnwụ na-adịtụ nkọ mgbe a na-eri ya, ọ nwekwara ike kpọnwụrụ akpọnwụ. Gwakọta ya na nri nwamba, kpalie nke ọma ma nye nwamba nri ka nwamba ga-erikọ nri a kpọnwụrụ akpọnwụ yana nri pusi. Dị ka ọ na-adịkarị, ọ bụrụ na afọ pusi adịghị mma, onye nwe nwamba nwere ike iji mmiri ọkụ mikpuo akpọnwụ akpọnwụ, nke mere na nwamba ahụ ga-adị mfe ma dị mfe mgbari mgbe ọ na-eri nri. Ụzọ nri dị n'elu nwere ike ọ gaghị ekwe omume maka nri nwamba ndị ọzọ, yabụ nri nwamba kpọnwụrụ akpọnwụ ka dị mma, ndị nwe pusi nwere ike nwalee ya.